सचिवालय बैठकका सनसनीखेज समाचार « Jana Aastha News Online
सचिवालय बैठकका सनसनीखेज समाचार
प्रकाशित मिति : १३ मंसिर २०७७, शनिबार २२:१३
नेकपाको आज दिउँसो सम्पन्न सचिवालय बैठकमा दुईजना अध्यक्षबाहेक वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल,महासचिव विष्णु पौडेल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि बोल्नुभएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई पुरानै अवस्थामा फर्किनुपर्यो भन्ने खालको थियो । ओलीको उक्त भनाईलाई काउण्टर दिँदै प्रचण्डले त्यो कसरी सम्भव छ ? दुबै पार्टी भङ्ग भइसकेको अवस्थामा कसरी पुरानै अवस्थामा फर्किन सकिन्छ ? भनेर सोध्नुभएको बताइन्छ ।
समस्याको मूल जरो केलाउँदै वरिष्ठ नेताले प्रधानमन्त्रीले पेश गर्नुभएको दश पृष्ठको पत्रलाई पनि पछिल्लो समस्याको मूल कडीको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको स्रोतको दाबी छ । उहाँले नेकपाको समस्या अरु केही नभएर नेताहरूको अतृप्त आकांक्षाको प्रतिफल रहेकोतर्फ संकेत गर्नुभएको थियो । भन्नुभयो ‘समस्याको जरो तपाईंहरूको व्यक्तिवादी सोच हो । अनि प्रधानमन्त्रीको विधि नमान्ने अहंकारवादी सोच हो । अहिले समस्याको मूल जरो त्यहीँ छ । तर,त्यसबारेमा तपाईंले कहिल्यै आत्मसमीक्षा गर्नु भएको छ ?’
बैठकको अन्तमा आगामी बैठकको लागि एक दिनको ग्याप राख्ने कुरो उठ्यो । त्यसमा दुई दिनको ग्याप राखेर बैठक बस्ने सहमति भएपछि मंगलबारको लागि तय गरियो । लगत्तै बैठकस्थलको बारेमा पनि नेता नेपालले आफ्नो धारणा राख्नुभएको बताइन्छ । त्यसक्रममा उहाँले ‘बैठक बालुवाटारमा होइन पार्टी मुख्यालयमा बस्ने गरौं । प्रचण्ड कमरेडलाई पनि म भन्न चाहन्छु,घरमा भेट्ने भन्दापनि अबदेखि पार्टी मुख्यालय प्रयोग गर्नुस् । पूर्व एमालेको बेलामा हामी सबैले पार्टी कार्यालय प्रयोग गथ्र्यौं । यी सबै केपीको पालादेखि बिग्रेको हो । कहिले बालकोट कहिले बालुवाटार ! जेएनको पालासम्म सबै पार्टी गतिबिधि,भेटघाट र छलफल पार्टी मुख्यालयमा नै हुन्थे ।’
बैठक समापन गर्ने क्रममा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि प्रधानमन्त्रीतर्फ संकेत गर्दै भन्नुभयो ‘तपाईंले पार्टीको निर्णय मान्दिन भन्नुभएको छ । पार्टीको कुनैपनि निर्णय,मतलब र वास्ता नै गर्नु भएको छैन । तपाईंले यसअघिको आधा कार्यकालको सहमति मानेर पछि तोडेको हो कि होइन ? भोलिपल्टै प्रचण्ड कार्यकारी होइन म नै कार्यकारी हुँ भन्ने पनि को हो ?’ भनेर धारणा टुङ्ग्याउनुभएको स्रोतको दाबी छ ।